abcnepali | » आहा ! भर्जिन ल्याण्ड सन्दकपुर आहा ! भर्जिन ल्याण्ड सन्दकपुर – abcnepali
आहा ! भर्जिन ल्याण्ड सन्दकपुर
abcnepali November 1, 2019
नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरेको नेपालका एकसय पर्यटकीय स्थल मध्ये इलाम जिल्लाको सन्दकपुर पनि एक हो । सूर्योदय तथा हिमश्रृंखलाहरुको दृष्यावलोकनका लागि विश्वकै नामुद स्थान सन्दकपुर इलाम जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित छ । यसको उचाइ समुद्र सतहबाट तीन हजार छ सय ३६ मिटर रहेको छ, जुन नेपालकै महाभारत पर्वतको सर्वोच्च शिखर हो । सन्दकपुर नामाकरण तथा यसको प्रसिद्धिका बारेमा खोज गर्दा इतिहासका अध्येताहरुका अनुसार इलाम जिल्ला तथा यस आसपासका क्षेत्रहरुमा परापूर्व कालमा लेप्चा जातिले शासनन गरेको मानिन्छ । लेप्चा जातिले कञ्चनजङ्घा हिमाललाई धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रुपमा हालसम्म पनि मान्ने गरेको पाइन्छ । सन्दकपुरबाट कञ्चनजङ्घा हिमाललाई दर्शन तथा आराधना गर्न सकिने हँुदा यसको नाम ‘सन्दफू’ राखियो । जसको अर्थ ‘उच्च स्थान’ भन्ने हुन्छ । कालान्तरमा यस क्षेत्रका लाप्चाहरु इलामकै नेपाल–भारतको सिमावर्ती क्षेत्र, भारतको दार्जिलिङ तथा सिक्किम क्षेत्रमा गएका थिए । यसको प्रभाव स्वरुप भारतीय क्षेत्रमा सन्दकपुरलाई आज पनि सन्दकफू नामले नै चिनिन्छ ।
त्यस्तै प्रकृतिपूजक हिन्दू ,बौद्ध, किरात धर्मावलम्वीहरुले साक्षात् देवी मान्ने माई भगवतीको शीर सन्दकपुर चुली नै भएकाले धेरै साधु–सन्तहरु आउने जाने ध्यान गर्ने गरेको र एक दिन एक जना नामुद सन्तले कठोर ध्यान तपस्या गरिरहेको अवस्थामा हिउँ आएको र त्यही हिउँमा सन्त लिन भएका हुँदा हिउँले सन्त पुरेको स्थान सन्तपुर भयो भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । यस्तै, उक्त स्थानमा विभिन्न धर्मावलम्वी साधु–सन्तहरु आइरहने भएकाले सन्तहरुको नगर अर्थात् सन्तहरुको पुर भएर सन्तपुर नामाकरण भएको भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । परापूर्वकालदेखि नै हिन्दू, बौद्ध, किरात धर्मका सन्तहरुले जप, तप तथा ध्यान गरेको पवित्र स्थल भएकाले सन्तपुर भन्ने गरेको कुरा र कालान्तरमा सन्तपुर शब्द सन्दकपुर भएको पुराना बुढापाकाहरुको भनाइ रहेको छ । अहिले पनि स्थानीय भेगमा सन्तपुर नाम नै उच्चारण गरिन्छ । परापूर्व कालदेखि हालसम्म पनि हिन्दू, बौद्ध, किरात आदि धर्मावलम्वीहरुले सन्दकपुर गएर नियमित पूजाका साथै बिभिन्न तिथि तथा समयमा पूजापाठ गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी यहाँको पृष्ठभूमि, प्राकृतिक अवस्था हेर्दा सबै धर्म संस्कारका मानिसहरुले धार्मिक सहिष्णुताको केन्द्रको रुपमा यस स्थालाई लिने गरेको पाइन्छ । यहाँ विभिन्न मन्दिर तथा गुम्वाहरु रहेका छन् ।
सन्दकपुर क्षेत्रलाई एक फन्को
इलाम सदरमुकामबाट उत्तर तर्फको ३६ किलोमिटरको दूरीमा पर्यटकीय स्थल सन्दकपुर रहेको छ । जहाँ पुग्नका लागि इलाम बजारबाट बिब्ल्याँटे बजार हुँदै त्यहाँबाट करिब पाँचसय मिटर मेची राजमार्ग हिँडेपछि राजमार्ग छोडेर माइपोखरी सन्दकपुर मार्गको यात्रा शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट कालोपत्रे अनि र कच्चीबाटो हुदै जसबीरे चिया बगान, ढकमक्क फुलेका बहुरङ्गी फूलहरु हेर्दै जाँदा सन्दकपुर गाउँपालिकामा अवस्थित नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक, साँस्कृतिक महत्व बोकेको जैविक विविधता युक्त रमणीय स्थल माइपोखरी पुगिन्छ । माइपोखरीको दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ । पौराणीक , धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत उल्लेख भएको यो पवित्र पोखरी नौकुने आकारमा १.८८ बर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जुन विश्व रामसार सूचीमा सन् २००८ मा सूचीकृत भइसकेको छ । ठकठके तथा गलैंचे झ्याउका लागि यो स्थान विश्वप्रसिद्ध छ । यसका साथै विभिन्न प्रकारका गुराँस तथा पुतलीको अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण यो पोखरी समुद्र सतहबाट करिब दुई हजार एक सय २१ मिटरकोे उचाइमा रहेको छ ।
राजनीतिक अध्येता तथा पर्यटकहरुलाई पुग्नै पर्ने अर्को स्थान माइपोखरीकै समीपमा रहेको देउराली बजारमाथि सात खाल्डे शहीद पार्क हो । यो स्थान बि.सं. २०१८ मा सातजना प्रजातन्त्र सेनानीलाई आफै खाल्डो खन्न लगाएर गोलीहानी मारेर पुरेको स्थान हो । यही देउराली क्षेत्रमा सन्दकपुर गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको छ । यस क्षेत्रबाट सन्दकपुर जानका लागि दुई वटा बाटोवाट जान सकिन्छ । छिन्टापु हुदै जाने हो भने पैदल बाटो ठाडो उकालो जानु पर्ने हुन्छ । देउराली बजारबाट करिब पाँचघण्टाको यात्रामा २९ सय ४६ मिटरको उचाइमा रहेको छिन्टापु पुग्न सकिन्छ । छिन्टापु क्षेत्रबाट बिभिन्न हिमश्रृङ्खला, लेकाली वनस्पति, जडिबुटी, बिविध जातका चराचुरुङ्गी, पुतलीहरु, जीवजन्तु, लेकाली जनजीवन , परम्परागत गोठपालन हेर्दै पुग्न सकिन्छ । साथै यस क्षेत्रबाट एक नं. प्रदेशका सबै जिल्लाहरु देख्न सकिन्छ । हिमालमा घाम परेसँगै पोखरीमा विभिन्न रङ्गको छायाँ देख्न सकिन्छ । पुरानो रानीवन रहेको यो क्षेत्रमा जैविक विविधतालाई नजिकबाट अवलोकन गर्दै सुनसान उकालो ठाडो बाटो हुँदै सन्दकपुर पुग्न सकिन्छ ।
यस्तै, अर्को बाटो देउरालीबाट कच्ची मोटर बाटो तय गरी माइमझुवा क्षेत्रमा विभिन्न जातजातिको रहनसहन तथा जीवनयापनको नजिकबाट अध्ययन गर्दै बुधबारे बजार हुँदै खुर्सानेटार पुग्न सकिन्छ । यहाँ दैले ढुङ्गा क्षेत्र, व्यवसायिक लोक्ता तथा किवी खेती गरिने यस क्षेत्रको अर्गानिक खेतीपाती, सागसब्जी स्वादिष्ट मानिन्छ । यस क्षेत्रलाई सन्दपुरयात्राको आधार शिविर मान्न सकिन्छ । यस क्षेत्रको बाटोमा देखिने विभिन्न आकृति र रोचक प्रकतिका भीमकाय ढुङ्गा पत्थरहरु पर्यटकहरुलाई जति हेर्यो त्यति आश्चर्यजनक लाग्दछन् । चैत तथा बैशाख महिनामा गुराँस फुल्ने फाँटहरु तथा विभिन्न प्रजातिका बनस्पति, चराचुरुङ्गी , ठाउँठाउँमा नागीहरु हेर्दै नेपाल भारतको सिमावर्ती क्षेत्र रहेको कालपोखरी पुगिन्छ । जुन समुन्द्र सतहबाट तीन हजार एक सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । यहाँ नेपाली भूमिमा लज होटल भएको सानो बजार समेत छ । कालपोखरीबाट विखे भञ्ज्याङ, चौरीखर्क हुँदै चट्टानको पहाड छिचोल्दै प्रकृतिको सुरम्य सौगात सन्दकपुर पुगिन्छ । आफ्नो अनुकुलता अनुसार सन्दकपुर चुलीमा बसेर गएको बाटो भन्दा फरक बाटोबाट फर्किएमा सम्पूर्ण सन्दकपुर क्षेत्रलाई नियाल्न सकिन्छ । जसका लागि कालपोखरीबाट माबुको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ । कालपोखरीबाट केही तल झरेपछि करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गराँसैगुराँसको फाँट बलुवन भेटिन्छ । चैतबैशाखमा विभिन्न रङ्ग र प्रजाति गुराँस ढकमक फूल्ने यो क्षेत्र पुग्दा जोकोहीलाई पनि साँच्चै प्रकृतिको रङ्गभूमि पुगेको आभाष हुन्छ । यही बाटोमा रेडपाण्डा संरक्षित क्षेत्र भेटिन्छ । लालीगुराँस, भालुचिन्डे , मालिगोको घना जंगलमा सैसल खेल्दै विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु खेलिरहेको पाइन्छ । रेडपाण्डाको अवलोकन गर्न हजारौ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक, शोधकर्ता तथा विशेषज्ञहरु यस क्षेत्रमा आउने गरेको पाइन्छ । चाँप, कटुस आदि लेकाली जंगल पार गर्दै झर्दा बाटोमै लालबास पोखरी भेटिन्छ । कालोपानी प्रकृतिले जस्तो छोडेको त्यही हालतमा यो पोखरीले संरक्षण खोजिरहेको छ । बिभिन्न पत्थरहरुमा बुद्ध धर्मका मन्त्र खोपिएका लेखोटहरु ठाउँठाउँमा देख्न पाइन्छ । यी सम्पदाहरु कति संरक्षण हुँदैछन् भने कतिपयको संरक्षण हुन सकेको छैन । यहाँ धार्मिक तथा ऐतिहासिक अनुसन्धानयोग्य अटल, अजर अक्षर पाउन सकिन्छ । यसै बाटोमा पर्ने माबुथाम पहाड दुई हजार ६० मिटर उचाइमा पर्दछ । शिवालय मन्दिर, चराचुरुङ्गी पाइने, बालागुरु गुफा माबुथाम नजिकै पर्ने, तपोभूमि, रमितेढुङ्गा आसपासका धेरै क्षेत्र देखिन्छ । रक क्याविडगको लागि यस क्षेत्रमा संभावित क्षेत्रहरु प्रशस्तै ठम्याउन सकिन्छ । डुप्दे छेम्पो नम्ग्यालिङ्ग गुफा माबुमा रहेको लामा उत्पादन पूर्वको गर्ने एकमात्र गुम्बा यही क्षेत्रमा रहेको छ । उगेन तन्गेलिगं गुम्वा, फरक शैलीमा निमार्ण भएको काथोग नमनाङ्ग होसेल छेलिङं गुम्वा, शिवकमलधाम पनि त्यही आसपासमा रहेका छन् । धेरै आन्तरिक पर्यटकहरु पुगिरहने इलाम जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो टोड्के झरना यसै क्षेत्रको यात्राबाट पुग्न सकिन्छ । साविक माइमझुवामा गाविसमा पर्ने दुई सय ८० फिट अग्लो यो झरना अत्यन्तै मनमोहक र आकर्षक छ ।
जमुनाको ढापपोखरी पछिल्लो समय पर्यटकहरुको रोजाइको स्थान बन्दै गएको छ । पोखरीमा डुङ्गा सवार गर्न तथा हिन्दु, किरात, बौद्ध मन्दिर, गुम्बाहरु यस क्षेत्रमा पाउन सकिन्छ । यसै क्षेत्रमा पर्ने हाँगेथाम क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका पुतली चरा पाउनाका साथै संसारमै दुर्लभ रेडपाण्डा लगायत धेरै जंगली जनावरहरु पाइने गर्दछ । चोयाटार, जौबारीको आलु विकास क्षेत्र र यस आसपासका फाँटहरु पनि पर्यटहरुका लागि आकर्षक बनेका छन् । यति ठाउँहरु घुमेर माइखोलामा संचालित हाइडो पावरको पनि अवलोकन गर्दै सुलुबुङ क्षेत्रमा रहेका किबी जोन अन्तर्गत रहेको व्यवसाहिक किवीखेती , अलैँचीखेती, बृहत पशुपालन आदिमा रमाउदै ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, लेप्चा लगायतका जातजातिका धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा भेषभूषालाई नजिक बाट नियाल्दै इलाम सदरमुकाम फिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अनि सुनाउनु हुनेछ तपार्इँ लेकभरि फुलेका चाँप अनि गुराँसका थुँगाहरु तपाईंकै स्वागतमा फुलेका छन् । खोलानाला झरना तपाईंकै स्वागत गान गाइरहेका छन् । अलैंचीको पहाड, संस्कारका घडाहरु, पूर्वको स्वर्ग, प्रकृतिहरुको रङ्गभूमी, सूर्योदयको डाँडा ,मठमन्दिर र गुम्वाहरु आज तपाईंलाई भेट्न आतुर छन् । यहाँका ढुगाढुगामा लेखिएका बुद्ध बाणि अनि थुम्का थुम्कावाट देखिने रमणिय दृष्यले सबैलाई भन्न मन लाग्छ जहाँ ढुगा ढुगामा देवताको वास छ जहाँ थुम्काथुम्कामा पर्यटनको आश छ आहा कति राम्रो भर्जिन ल्याण्ड अर्थात पवित्र भूमि सन्दकपुर ,जो तपाँइलाई पर्खि रहेको छ ।